यौन सम्बन्धपछि के गर्ने-के नगर्ने ? | Rajmarga
एजेन्सी । शारीरिक सम्बन्ध सबै महिला पुरुषका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ पहिलो यौन सम्पर्कका त जीवनमा स्मरणीय हुन्छ । पहिलो यौन सम्पर्कका विषयमा महिला र पुरुष दुवैले पहिलेदेखि नै कल्पना गरिरहेका हुन्छन् ।
यौन सम्बन्ध जीवनमा जत्तिको महत्व छ, त्यो भन्दा धेरै महत्व त्यसपछिका क्रियाकलापले निर्धारण गर्छ । यौन सम्बन्धपछि के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा अनेक प्रकारका चर्चा परिचर्चा हुन्छन् । हामीले यौन सम्बन्धपछि के गर्ने के नगर्ने ? भन्ने विषयमा चर्चा गर्दैछौँ ।
१. आफ्नो पार्टनरसँग सामिप्यता कायम गर्नुपर्छ । यौन सम्पर्कपछि दुवैजना अलग अलग हुनुहुन्न । त्यस्तो गल्ती कहिल्यै गर्नु हुँदैन । यौन सम्बन्धपछि अर्कोपट्टि फर्किएर सुत्ने व्यवहारले दुवैजनाबीच सामिप्यता हुँदैन । त्यसैले जीवनका राम्रा भोगाइका विषयमा एकअर्कालाई सुनाउनु पर्छ । दुखका कुरा गर्नु हुँदैन ।
२. यौन सम्बन्धपछिका क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । धेरैले सम्बन्ध अघि धेरै ध्यान दिने र सम्बन्धपछि ध्यान नै नदिने समस्या हुन्छ । सम्बन्धलाई प्रभावकारी पार्नका लागि यौन सम्बन्धपछि पनि अन्य क्रियाकलाप जारी राख्नुपर्छ । महिलाको तुलनामा पुरुष चाडै शिथिल हुन्छन् । यो बानीलाई पुरुषले धेरै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३. यौन सम्पर्कपछिको सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यौन रसले कपडा भिज्ने वा अन्य भागमा लाग्दा यौन अंगमा संक्रमणको डर हुन्छ । त्यसैले यौन सम्पर्क गर्ने बिस्तारा वा यौन सम्पर्क गरिसकेपछिको सरसफाइमा दुवैजनाले ध्यान दिनुपर्छ । तर साबुन पानीले यौन अंग धुनु हुँदैन ।
४. यौन सम्बन्धपछि पानी पिउनु पर्छ । सकभर फ्रेस जुस पिउँदा शरीरलाई आवश्यक अन्य तत्व पुरा हुन्छन् । सम्बन्धपछि शरीरमा पानीको मात्रामा कमि आउँछ । फलफूल खानु त शरीरका लागि उत्तम हुन्छ ।
५. यौन सम्पर्कपछि भित्रि बस्त्रहरु लगाउनु हुँदैन । भित्रि बस्त्र लगाउँदा शरीरमा संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले यौन सम्बन्धपछि सफा र नरम कपडाले शरीर पुच्नुपर्छ । भित्रि बस्त्र लगाउँदा यौनाङ्ग गुम्सिन पुग्छ र त्यसले संक्रमणको खतरा बढ्छ ।
Previous post: आँखाअगाडि अँधेरो छाउँछ वा रिङ्गटा लाग्छ ? ध्यान दिनुस्, यस्तो समस्या हुन सक्छ
Next post: प्रचण्डले भने–चुनाव चिन्हको विषय टुंगिएको छैन